Avara-pianarana : Tsy mila « putschiste » -
AccueilRaharaham-pirenenaAvara-pianarana : Tsy mila « putschiste »
Nanainga nihazo an’i Lafrantsa omaly i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, mikasa hanatrika ilay lanonam-panokafana ny ASPA sy ny Newpolis izay hatao rahampitso 13 septambra 2018. Naneho ny heviny manoloana izany anefa ireo avara-pianarana malagasy…
Mitsipaka ny fanatrehan’i Andry Rajoelina ilay lanonam-panokafana ny ASPA sy ny Newpolis izay hatao any Frantsa amin’ny faha-13 septambra ho avy izao ireo mpianatra sy avara-pianarana malagasy, taranja “Science Po” ao Parisy. Nandefa taratasy fangatahana ny fanafoanana io fanasana an’i Andry Rajoelina io izy ireo tamin’izany fa ao anatin’ny fotoam-pifidianana filoham-pirenena i Madagasikara ka miendrika fitanilana ny fanatrehan’ity filohan’ny HAT ity izany lanonana manana ny hasiny izany, ary ho ampiasain’ity kandidà ity amin’ny propagandiny.
Nomarihan’ireto mpianatra sy avara-pianarana malagasy ireto ihany koa fa manana tantara manokana ity kandidà ity dia ny fanonganam-panjakana nitranga teto amin’ny firenena ny taona 2009, koa nambaran’izy ireo fa mifanohitra tanteraka amin’ny lohahevitra izay horesahina mandritra ilay lanonana. Nasian’izy ireo tsindrim-peo fa tsy afaka hiresaka mikasika ny “demôkrasia aty Afrika” mihitsy i Andry Rajoelina. “Tsy olona niakatra teo amin’ny fahefana tamin’ny alalan’ny fampiasana miaramila velively no afaka hiresaka manodidina ny demôkrasia”, hoy hatrany ireo mpianatra sy avara-pianarana atsy Parisy.
Mametra-panontaniana amin’ny birao vaovao mitantana ny ASPA moa ireto mpianatra malagasy ireto, ny antony nahatonga izao fanasana ity “putschiste” ity izao raha tsy misy tambiny na tombontsoa manokana takalon’izany. “Tena tsy mahalala ny tantaran’ity mpanongam-panjakana ity marina tokoa ve ireo mpikarakara sa tena “malhonnêteté intellectuelle” mihitsy », hoy hatrany ireo Malagasy any an-toerana. Manahy ny fisian’ny kolikoly araka izany izy ireo koa mangataka ny fanafoanana izany fanasana izany.
Tena mba fanirian-dRajoelina mafy mihitsy ny ho isan’ny antsoina hoe avara-pianarana fa tsy DJ na « le jeune putschiste ». Mitady izay fomba rehetra hahazoana izany « anarana » izany ny tenany sy Mamy Ravatomanga kanefa dia izao nahazo daka tsy hita maso avy tamin’ny mpianatra sy ny avara-pianarana Malagasy ao amin’ny taranja « Science Po » any Frantsa izao. Zavatra roa ihany no fanirian-dRajoelina eto an-tany: tsy antsoina hoe « le jeune putschiste » sy DJ intsony.
Marihina moa fa mitady fanampiana ara-pitaovana sy ara-bola ity fikambanana ASPA mikarakara ny hetsika izay hatao amin’ny 13 septambra ho avy izao ity, izany hoe, ao amin’ny mety tsara amin’i Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina mihitsy.